Development Network for Immigrants ─ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် လူထုလုံခြုံရေးရှိစေရန် နိုင်ငံခြားမှပြန်လာသော ရောဂါသည်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အထူးဂရုပြုရမည့် အကြောင်းအရာများကို ဗဟို ကပ်ရောဂါ ထိန်းသိမ်းရေး စင်တာ (CECC) မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် လူထုလုံခြုံရေးရှိစေရန် နိုင်ငံခြားမှပြန်လာသော ရောဂါသည်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အထူးဂရုပြုရမည့် အကြောင်းအရာများကို ဗဟို ကပ်ရောဂါ ထိန်းသိမ်းရေး စင်တာ (CECC) မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Date : 2020/6/23
Updated : 2020/6/23 下午 12:00:00
နိုင်ငံခြားမှ COVID-19 ရောဂါသည်များ နိုင်ငံသို့ပြန်လာချိန်တွင် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ပျံသန်းရေးလုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့် ဝင်ရောက်လာပြီးချိန်တွင် လူထုအတွင်း ရောဂါပျံ့နှ့ံမှု အန္တရာယ်လျှော့ချရန်အတွက် နိုင်ငံသို့ပြန်လာရန် လေယာဉ်ပေါ်တက်ရောက်ခြင်းမပြုချိန်တွင် နိုင်ငံခြားမှပြန်လာမည့် ရောဂါသည်များအနေနှင့် ကူးဆက်ရောဂါ ထိန်းသိမ်းရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်ခွဲ2နှင့်3၏ ပိုဒ်ခွဲ 58 စာပုဒ် 1 ၏ စာပုဒ်ခွဲ2နှင့်3နှင့်အညီ အောက်ပါ အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရမည် ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားသည်ဟု ဇွန်လ 17 ရက်တွင် ဗဟိုကပ်ရောဂါထိန်းသိမ်းရေးဌာနချုပ် မှမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူများကို ထိုဥပဒေတွင်ပါဝင်သော စာပိုဒ် 69 တွင်ပါသည့်အတိုင်း ဒဏ်ကြေး NT$10,000 မှ NT$150,000 အထိ ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။
1. လေယာဉ်ပေါ်တက်ရောက်သည့်နေ့နှင့် ဆိုက်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍2လရှိပြီဖြစ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာ သက်သာလာပြီဖြစ်သည်။
2. ဆိုက်ရောက်သည့်နေမှစ၍ 10 ရှိပြီဖြစ်ပြီး ရောဂါသည်မှ SARS-COV-2အတွက် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း နမူနာစစ်ဆေးမှုမှ ရောဂါမရှိကြောင်း စစ်ဆေးချက်အဖြေရရှိပြီးဖြစ်သည်။ (စစ်ဆေးချက်များကို 24 နာရီခြား၍ ပြုလုပ်သည်။)
နိုင်ငံခြားမှ ရောဂါသည်များအနေနှင့် ထိုင်ဝမ်သို့ပြန်လာချိန် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် မျက်နှာဖုံးများ တပ်ဆင်ထားရန် ဗဟိုကပ်ရောဂါထိန်းသိမ်းရေးဌာနချုပ် မှထောက်ပြခဲ့သည်။ ခရီးသွားထောက်ခံချက်၏ ကပ်ရောဂါ အဆင့်-3 နေရာများမှ ခရီးသွားများအနေနှင့် ဝင်ရောက်လာချိန်အတွင်း ရောဂါခြေချုပ်စီမံကိန်းများကိုလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများတွေ့ရပါက၊ ဤရောဂါသည်များကို နယ်စပ်ဒေသ စစ်ဆေးချက်များပြုလုပ်ပြီးချိန်တွင် ဗဟိုရောဂါခြေချုပ်ထားရှိသည့်နေရာ၌ ထားရှိရန် တောင်းဆိုမှုပြုထားသည်။ စစ်ဆေးချက် အဖြေမှာ ရောဂါမရှိကြောင်းပြသပါက ၎င်းတို့အနေနှင့် အိမ်တွင်း ရောဂါခြေချုပ်အဖြစ်ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်သည်။ ရောဂါမပြသောသူများအနေနှင့် ဝင်ရောက်ပြီးချိန် 14 ရက်အတွင်း အိမ်တွင်းရောဂါခြေချုပ်ဖြင့်နေထိုင်သင့်သည်။